Target ကြက်သားဝတ်စုံကိုပိတ်ပါ Martech Zone
တနင်္လာနေ့, အောက်တိုဘာလ 2, 2006 တနင်္ဂနွေ, စက်တင်ဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ကြက်သားဝတ်စုံများကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိဘဲဝတ်ဆင်နိုင်သောအတန်းမှာမထားခဲ့ပါနှင့်။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ကြက်သားဝတ်စုံများကိုမစွန့်ခွာပါနှင့်။ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ရှိသူတစ် ဦး ကသူ့လက်များကိုရယူနိုင်သည်။
ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ Chicken Suits များကိုမထားခဲ့ပါနှင့်။ ဖခင်သည်သူ၏ကြိုက်နှစ်သက်သောသားငယ်အားဒေါ်လာ ၅ ဒေါ်လာကို Chicken Suit ပေါ်တွင် တင်၍ Super Target တစ်ခုလုံးပတ်ပတ်လည်တွင်ရင်ခွင်ပိုက်နိုင်စေရန်ဖခင်ကလောင်းနိုင်သည်။
“ အမေ…ကြည့်စမ်း၊ ဒါကကြက်သားလူပဲ!” ဟုအော်နေသောကလေးငယ်များ၏ပျော်ရွှင်မှုကိုပါ။
ကျေးဇူးပြုပြီးကြက်သားဝတ်စုံတွေကိုဖယ်ရှားပေးပါ။ အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်ဖခင်ဖြစ်သူသည်သူမအားပြင်းပြင်းထန်ထန်ရယ်မောစေလိုပါကသားဖြစ်သူက Chicken Suit လက်မောင်းနှင့်စတိုးဆိုင်ရှေ့တွင်ပြေးနေသောကြောင့်သူသည်နှလုံးရောဂါဖြင့်သေဆုံးနိုင်သည်။
Youtube အတွက်ဒေါ်လာတစ်ဘီလီယံလော။ ဖြစ်နိုင်စရာ။
2:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 8, 36
သူသည်နံနက်တိုင်းမြို့တွင်းကားရပ်နားရာနေရာတွင်ရပ်နေသောကောင်လေးထက်လက်ကမ်းစာစောင်များပေးသည့်ကောင်ထက်ပိုကောင်းသောကြက်သားတစ်ကောင်ဖြစ်နိုင်သည်။ Yup - ကြက်သားဝတ်စုံ ၀ တ်ပြီး။
3:2006 pm မှာအောက်တိုဘာ 9, 31
ဒါကအံ့သြစရာပဲ။ ဒီအတွက်ဗီဒီယိုရှိရမယ်။ !?!?!! ကျေးဇူးပြု၍ ဘီလ်ပေးပါ။ မင်းဒီဗီဒီယိုကိုယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလား။ !?!?
3:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 4, 52
ဒေါက်ဂလပ်စ်အားကလေးများအားရယ်မောစေသည့်ကြက်ဆင်ဝတ်စုံတစ်ခုတွင်သင်က ၁၇ နှစ်အရွယ်ဖခင်တစ် ဦး လော။ Santa Claus ထက်ပိုကောင်းတယ်
3:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 10, 59
ဟုတ်တယ်၊ ဒါငါ့သားပဲ ဘီလ်.
4:2006 pm တွင်အောက်တိုဘာ 2, 02